သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်
သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်(Suvarnabhumi Airport; ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ဒါ့အာကာၐယာန်သုဝဏ်ဏဘူမိ) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ မြို့တော် ဘန်ကောက်အရှေ့ဘက် ၂၅ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ဘန်ကောက်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအကြား ကူးသန်းသွားလာကြသည့် လေယာဉ်ခရီးသည်များအား အကျိုးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဘန်ကောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်(သစ်)ဟုလည်း လူသိများသည်။ ဘန်ကောက်မြို့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ၂ ခု ရှိသည့်အနက် အဓိက လေဆိပ်ဖြစ်သည်။ အခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာ ဒွန်မောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်သည် မြေဧရိယာ ၁၉၈၀ ဟက်ကာ (၇၄၀၀ ဧက) ကျယ်ဝန်းသည်။
ဘင် ဖၠိ၊ သၟုတ် ပြကန် ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
* Orient Thai Airlines
၅ ပေ / ၂ မီတာ
01R/19L ၄,၀၀၀ ၁၃,၁၂၃ နိုင်လွန်ကတ္တရာ
01L/19R ၃,၇၀၀ ၁၂,၁၃၉ နိုင်လွန်ကတ္တရာ
သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်အား ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းလေယာဉ် အချို့အတွက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်တွင်းလေယာဉ်အများစုနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်များအတွက် ဖွင့်လှစ် လည်ပတ်ခဲ့သည်။  သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိုင်း လေကြောင်းလိုင်း၊ ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း၊ အောရီရန့်ထိုင်း လေကြောင်းလိုင်း တို့၏ အခြေစိုက်လေဆိပ်ဖြစ်သည်။
သုဝဏ္ဏဘူမိ (ရွှေရောင်မြေ) ဟူသောနာမည်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဗလအတုလျတေဇကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရွှေနိုင်ငံဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်သည် ၁နှစ်လျှင် ခရီးသည် ၅၃ သန်း ဝန်းဆောင်မှုပေးနိုင်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခု (၂၀)မြောက် အလုပ်အများဆုံး လေဆိပ်ဖြစ်သည်။ 
လေဆိပ်ကုဒ် "BKK"ကို ဒွန်မောင်းလေဆိပ်မှ လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။
Aeroflot မော်စကို - ရှေရ်ရေမ်မေတီယေဝို
Air အစတာနာ Almaty, Astana
Air ဩစထြယ်လ် (ချေန်နိုင် Airport|ချေန်နိုင်]] (ends 29 October 2016), Saint–Denis de la Réunion
Air ချိုင်းနား ပေကျင်း-မြို့တော်၊ Hangzhou, Tianjin
Air ပြင်သစ် Paris–ချာရ်လေစ် de Gaulle
Air အိန္ဒိယ ဒေလီ, Mumbai
Air Macau မကာအို
All Nippon Airways တိုကျို-ဟာနဲ့ဒါ့၊ တိုကျို-နာရိတ
Asia Atlantic Airlines တိုကျို-နာရိတ၊ Denpasar/Bali
Asiana Airlines ဆိုးလ်-အင်ချွန်
ဘန်ကောက် လေကြောင်းလိုင်း ချင်းမိုင်၊ ချင်းရိုင်၊ Da Nang, Dhaka, Ko Samui, Krabi, Lampang, Luang Prabang, Malé, မန္တလေး၊ Mumbai, နေပြည်တောင်၊ ဖနွမ်းပင်၊ ဖူးခက်၊ စီရန်ရိ၊ Sukhothai, Trat, ဗီယင်ကျန်း၊ ရန်ကုန်
British Airways လန်ဒန်-ဟိသ်ရိုး
Business Air ဆိုးလ်-အင်ချွန်၊ Chongqing
Cambodia Angkor Air ဖနွမ်းပင်၊ စီရန်ရိ
Cathay Pacific ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူ
China Airlines Amsterdam (ends2December 2016), Kaohsiung, ထိုင်ပေ-ထောင်ယွမ်
China Eastern Airlines Chengdu, ကူမင်း၊ Lanzhou, Nanchang, Nanjing, Ningbo, Qingdao, ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ Wenzhou, Wuhan, Wuxi, Taiyuan, Xi'an, Xining, Yinchuan
Seasonal: ပေကျင်း-မြို့တော်၊  Hangzhou, Hefei
China Southern Airlines Changsha, Guangzhou, Guilin, Jieyang, Lanzhou, Nanning, Shenzhen, Urumqi, Wuhan, Zhengzhou
ဒယ်လ်တာ လေကြောင်းလိုင်း တိုကျို-နာရိတ
Druk Air Bagdogra, Dhaka, Guwahati, Thimphu/Paro
Eastar Jet Jeju, ဆိုးလ်-အင်ချွန်
EgyptAir Cairo, Jakarta-Soekarno-Hatta, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
El Al ဘန်ဂူရီယွန်-တဲလ်အဗစ်
အဲမရိတ် လေကြောင်းလိုင်း Christchurch, Dubai-International, ဟောင်ကောင်၊ Sydney
Ethiopian Airlines Addis Ababa, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
EVA Air Amsterdam, လန်ဒန်-ဟိသ်ရိုး၊ ထိုင်ပေ-ထောင်ယွမ်၊ Vienna
flydubai Dubai-International (begins 29 November 2016)
Hainan Airlines ပေကျင်း-မြို့တော်၊ Haikou, Nanning
Hong Kong Airlines ဟောင်ကောင်
Japan Airlines Nagoya–Centrair, Osaka–Kansai, တိုကျို-ဟာနဲ့ဒါ့၊ တိုကျို-နာရိတ
Jeju Air Busan, ဆိုးလ်-အင်ချွန်
Jet Asia Airways တိုကျို-နာရိတ
Jetstar Asia Airways Fukuoka (ends 1 October 2016), စင်ကာပူ
Jetstar Pacific Airlines ဟနွိုင်း၊ ဟိုချီမင်းစီးတီး
Juneyao Airlines ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း
Kenya Airways Guangzhou, ဟောင်ကောင်၊ Nairobi–Jomo Kenaytta
Korean Air Busan, ဆိုးလ်-အင်ချွန်
လာအို လေကြောင်းလိုင်း Luang Prabang, Savannakhet, ဗီယင်ကျန်း
LOT Polish Airlines Seasonal Charter: Warsaw–Chopin (begins5November 2016)
Lucky Air ကူမင်း
Mega Maldives Malé, Shenyang
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း မန္တလေး၊ (resumes3September 2016), ရန်ကုန်
မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း မန္တလေး၊ ရန်ကုန်
Nordwind Airlines Seasonal Charter: Arkhangelsk, Irkutsk, Kazan, Kemerovo, Khabarovsk, Krasnoyarsk–Yemelyanovo, Mineralnye Vody, Nizhnevartovsk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Perm, Rostov-on-Don, Samara, St. Petersburg, Surgut, Tomsk, Ufa, Ulan–Ude, Vladivostok, Yekaterinburg
Orient Thai Airlines ဟောင်ကောင်
Plus Ultra Líneas Aéreas Seasonal: Madrid
Qatar Airways Doha, ဟနွိုင်း
Royal Brunei Airlines ဘန်ဒါစီရီဘီဂါဝန်
Royal Jordanian Amman–Queen Alia, Guangzhou, ဟောင်ကောင်
Seasonal: Krasnoyarsk–Yemelyanovo, Novosibirsk, Vladivostok (begins9October 2016)
Shaheen Air Karachi, Lahore
Shanghai Airlines Chongqing, ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း
Shenzhen Airlines Fuzhou, Jieyang, Quanzhou, Shenzhen
Sichuan Airlines Chengdu, Haikou
SpiceJet Chennai, Kolkata
Spring Airlines Beihai, Changchun, Changzhou, Chengdu, Dalian, Fuzhou, Harbin, Hangzhou, Jinan, Lanzhou, Nanchang, Ningbo, ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ Shijiazhuang, Yangzhou, Yinchuan
SriLankan Airlines Colombo, Guangzhou, ဟောင်ကောင်
Thai Airways International Auckland, Bangalore, ပေကျင်း-မြို့တော်၊ Brisbane, Brussels, Busan, Changsha, Chengdu, Chennai, ချင်းမိုင်၊ Colombo, Copenhagen, Delhi, Dhaka, Denpasar/Bali, Dubai–International, Frankfurt, Fukuoka, Guangzhou, ဟနွိုင်း၊ ဟိုချီမင်းစီးတီး၊ ဟောင်ကောင်၊ Hyderabad, Islamabad, Jakarta-Soekarno-Hatta, Karachi, Kathmandu, Koh Samui, Kolkata, Krabi, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ကူမင်း၊ Lahore, လန်ဒန်-ဟိသ်ရိုး၊ Manila, Melbourne, Milan–Malpensa, Moscow–Domodedovo (resumes 1 November 2016), Mumbai, Munich, Muscat, Nagoya–Centrair, Osaka–Kansai, Oslo–Gardermoen, Paris–Charles de Gaulle, Perth, ဖနွမ်းပင်၊ ဖူးခက်၊ Rome–Fiumicino , Sapporo–Chitose, ဆိုးလ်-အင်ချွန်၊ ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ စင်ကာပူ၊ Stockholm–Arlanda, Sydney, ထိုင်ပေ-ထောင်ယွမ်၊ တိုကျို-ဟာနဲ့ဒါ့၊ တိုကျို-နာရိတ၊ ဗီယင်ကျန်း၊ Xiamen, ရန်ကုန်၊ Zürich
Seasonal: Gaya, Sendai, Varanasi
operated by ထိုင်းစမိုင်း လေကြောင်းလိုင်း Changsha, Chongqing, ချင်းမိုင်၊ Chiang Rai၊ ဟိုက်ရိုင်၊ Khon Kaen, မကာအို (ends 31 August 2016), Narathiwat, ပီနန်၊  ဖူးခက်၊ စီရန်ရိ၊ Surat Thani, Ubon Ratchathani, Udon Thani, ရန်ကုန်
ထိုင်းဗီယက်ဂျက် လေကြောင်းလိုင်း Seasonal: Gaya
T'way Airlines ဆိုးလ်-အင်ချွန်
Ural Airlines ပေကျင်း-မြို့တော်၊  Changchun, Harbin, Khabarovsk, Yekaterinburg
ဗီယက်ဂျက် လေကြောင်းလိုင်း ဟနွိုင်း၊ ဟိုချီမင်းစီးတီး
Vietnam Airlines Da Nang, ဟနွိုင်း၊ ဟိုချီမင်းစီးတီး
↑ World Aero Data ရှိ VTBS အတွက် လေဆိပ် အချက်အလက်များ။ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆ အရ။ ရင်းမြစ်: DAFIF.
↑ Airport information for BKK at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective October 2006).
↑ "Don Mueang to be city budget air hub"၊ Bankgok Post။2July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AirAsia to shift to Don Mueang။ 29 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2011 Statistics Archived 27 November 2011 at the Wayback Machine.
↑ Air Austral Splits Bangkok /ချေန်နိုင် Operations in W16။ 14 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Capital Airlines Adds Zhanjiang – Bangkok Service from late-Oct 2015။ Airlineroute.net (7 October 2015)။7October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Update as of 15MAR16: China Airlines W16 Europe Operation Changes။ airlineroute။ 15 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ China Eastern Plans Nanjing - South East Asia Service from July 2016။ routesonline။ 13 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ China Eastern Adds New Bangkok Service in 16Q1။ airlineroute။ 26 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ China Southern Adds Lanzhou – Bangkok Service from late-Jan 2016။ 14 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Eastarjet Adds Jeju - Bangkok Flights from Oct 2015။ Airlineroute.net (8 September 2015)။ 8 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jetstar Asia Cancels Fukuoka Flights from Oct 2016 (20 May 2016)။ 20 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MegaMaldives Adds New Service from Jan 2016။ 14 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Новое направление – из Архангельска в Бангкок။ ОАО "Аэропорт "Архангельск"။ 17 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Plus Ultra Files New Preliminary Long-Haul Schedules from July 2016။ routesonline။ 16 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ S7757 schedule. (S7 Airlines flight: Krasnoyarsk -> Bangkok) Archived7November 2016 at the Wayback Machine.. Info.flightmapper.net. Retrieved on 25 August 2013.
↑ S7860 schedule. (S7 Airlines flight: Bangkok -> Novosibirsk) Archived7November 2016 at the Wayback Machine.. Info.flightmapper.net. Retrieved on 25 August 2013.
↑ S7 Airlines Adds Vladivostok – Bangkok Flights in W16။ airlineroute။ 29 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shaheen Air Schedules Bangkok Launch from late-May 2016။ airlineroute။ 20 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shenzhen Airlines Expands Bangkok Operation from Jan 2016။ Airlineroute.net (20 October 2015)။ 20 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shanezhen Airlines Adds Guangzhou - Bangkok Service in Sep/Oct 2015။ Airlineroute.net (20 August 2015)။ 20 August 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sichuan Airlines Adds New China – Thailand Routes in July/August 2015။ airlineroute။ 14 July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Spicejet offer: Ticket prices cut to Rs 9,999 on new direct Chennai to Bangkok flight။ The Financial Express (4 November 2015)။ 14 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၇.၀ ၂၇.၁ ၂၇.၂ Spring Airlines Adds New Thailand Service in W15။ Airlineroute.net (7 October 2015)။7October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၈.၀ ၂၈.၁ ၂၈.၂ ၂၈.၃ Spring Airlines Adds New Routes to Bangkok in July 2016။ routesonline။6June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Spring Airlines Continues Chengdu – Bangkok Service from April 2016။ airlineroute။5April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ Spring Airlines Adds New Bangkok Routes in S16။ airlineroute။ 23 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ THAI Smile Ends Macau Service in late-August 2016။ routesonline။ 13 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ THAI Moves Penang Service to THAI Smile from July 2016။ routesonline။ 30 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Ural Airlines to Adds New Beijing – Bangkok Service from late-Oct 2015"၊ Airline Route၊ 17 September 2015။ 17 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ Ural Airlines Adds Khabarovsk – Changchun / Bangkok Service from mid-Oct 2015။ airlineroute။ 14 April 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်&oldid=718962" မှ ရယူရန်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။